Madaxweyne Trump Oo Hor Istaagay Dhambaalo Loo Soo Diray Joe Biden[Xogg] | 18 May News
Madaxweyne Trump Oo Hor Istaagay Dhambaalo Loo Soo Diray Joe Biden[Xogg]
November 13, 2020 - Written by admin
Xilli dalka Mareykanka uu ka taagan yahay khilaaf la xiriira doorashada madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, Joe Biden, Trump-na uu diiday in uu aqabalo natiijada doorashada iyo in lagaga guuleystay ayaa waxaa uu jahwareer iyo culeys ka taagan yahay marxaladda kala guurka iyo sidii madaxweynaha la doortay uu kooxda kala guurka uga la shaqeyn lahaa xil wareejinta.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, oo dalkaas u qaabilsan xiriirka ama la macaamilka hogaamiyeyaasha kale ee caalamka iyo xiriirka dibadda, ayaa qaar kamid ah warbaahinta Mareykanka waxay kusoo warrameen in madaxweynaha la doortay ay u diideen farriimo ay Joe Biden usoo direen hogaamiyeyaasha dalalka kale ee caalamka, kuwaas oo ay ahayd in loo gudbiyo Joe Biden, maadaama ay isaga u socdeen.
Wasaaraddan oo uu hogaamiyo xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Mike Pompeo, ayaa la sheegay inay is-hor istaag ku sameysay qoraallada ku socday Biden, kuwaas oo la aaminsan yahay inay u badan yihiin hambalyo iyo xiriir wada shaqeyn.
Sarkaal ka tirsan xafiiska arrimaha dibadda ayaa warbaahinta CNN u sheegay in Joe Biden iyo kooxdiisa looga dhaartay inay arkaan farriimahaas.
Sida caadada ka ahayd Mareykanka, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas waxa ay mar walba xilligan oo kale fududeyn jirtay xiriirrada dibadda ee lala soo sameynayo madaxweyne walba oo la doortay, halkaas oo madaxda dalalka caalamka ay usoo marsiiyaan farriimaha hambalayada iyo kuwa kale.
Haseyeshee xilligan, madaxweyne Trump ayaa la sheegay in uu Biden u diiday in uu helo farriimahaas muhiimka ah, maadaama uusan aqoonsaneyn guushiisa.
Taa badelkeeda waxaa dhacday in madaxweynaha la doortay uu isaga xiriirro toos ah la sameeyo madaxda caalamka, waxaana Joe Biden uu ilaa iyo hadda xiriir toos ah lasoo sameeyay madaxda dalalka Jarmalka, Canada iyo Ingiriiska, kuwaas oo aan usoo marin madaxweyne Biden wasaaradda arrimaha dibadda.
Sidoo kale madax badan oo caalamka ka tirsan ayaa Biden ugu soo hambalyeeyay baraha bulshada iyo wicitaan telefoon, inkastoo madaxda dalalka qaar oo ay kamid yihiin Shiinaha iyo Ruushka ay ka gaabsadeen.
Inkastoo BBC-da aysan xaqiijin karin, haddana warbaahinta CNN ayaa kusoo warrantay in go’aanka lagu xannibayo farriimaha ku socda Biden uu qeyb ka yahay ninka ugu sareeya wasaaradda arrimaha dibadda, Mike Pompeo.
Qoraalka sawirka, Aqalka Cad
Arrintan ayaa soo shaac baxday maalmo uun kaddib markii xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Mike Pompeo uu sheegay in isaga iyo saraakiisha kale ee xafiiskiisa ay ka shaqeynayaan sidii Trump uu mar kale xafiiska ula wareegi lahaa.
“Waxaa jiri doonta kala guur sax ah oo uu mar labadaad xafiiska kula wareegayo madaxweyne Trump”, ayuu Pompeo ka yiri shir jaraa’id oo uu ka hadlayay.
Warbaahinta Mareykanka qaar kamid ah ayaa sidoo kale kusoo warramay in Biden aanan laga hor istaagin oo keliya farriimaha kusoo dhacay wasaaradda arrimaha dibadda balse sidoo kale aanan la siinin xog la xiriirta arrimaha sirdoonka.
Trump ayaa wali aaminsan in doorashada uu isagu ku guuleystay, sidookalena doorashadii dhawaan dhacday ay hareereyeen “wax isdaba marin”.
Go’aankan ayay diblomaaisyiin badan aaminsan yihiin in uu culeys ku yahay hawlo badan oo la qaban lahaa axilliga kala guurka, waxaana kamid ah saxiixa dukumiintiyo uu madaxweynaha la doortay kula wareegayo xafiiska iyo in guddiga Biden uu aqalka cad kala shaqeeyo marxaladda kala guurka iyo sidii madaxweynaha la doortay uu xafiiska ula wareegi lahaa.
Gudoomiyihii Wasaarada Waxbarashada Gobolka Maroodijeex Oo Xilkii Laga Qaaday Iyo Gudoomiye Cusub Oo Loo Magcaabay Booskaasi[Faahfaahin]
Musharax Axmed Cali Ubaxle Oo Deeq Buugaaga Gaadhsiiyay Ardayda Dugsisaga Sare Ee Magaalada Wadaamagoo[Muuqaal]
Gudoomiyaha Gobolka Sool Oo Shir La Yeeshay Isuduwayaasha Wasaaraddaha Ka Hawlgala Gobolkaasi[Muuqaal]
Ceelka Loogu Magacdaray Degmada Ceelafwayn Oo Lagu Wado Dibu Dhis Iyo Dibu Habayn[Muuqaal]
Wasiir Ku Xigeenka Wasaarada Caafimaadka Somaliland Oo Xadhiga Ka Jaray Xarunta Hooyadiyo Dhalaanka Ee Magaalada Fadhigaab[Muuqaal]